अँध्यारो पदार्थ के हो र यो केको लागि हो? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
अँध्यारो पदार्थ के हो र यो केको लागि हो?
हाम्रो ब्रह्माण्ड मा, हामी छुन, हेर्न, गन्ध वा महसुस गर्न सक्छौं सबै यो केवल%% छ जुन अवस्थित छ। यो कुरा जुन हामीसँग व्यवहार गर्न प्रयोग गरिएको छ ब्रह्माण्डमा विरलै दुर्लभ छ।
यदि हामीलाई केवल%% थाहा छ भने, बाँकीलाई के हुन्छ? प्रमाणले सुझाव दिन्छ कि ब्रह्माण्डको २ mass% द्रव्यमान र उर्जा तथाकथित बाट बनेको छ अँध्यारो पदार्थ यद्यपि अन्धकार पदार्थ आज पनि साँचो रहस्य नै छ, हामीलाई अँध्यारो पदार्थको बारेमा के थाहा छ? यो केको लागि हो?
1 गाढा पदार्थ
2 तपाईं कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि अन्धकार पदार्थ छ?
3 केको लागि अन्धकार छ?
हाम्रो ब्रह्माण्ड पदार्थ र उर्जाले बनेको छ। हामी दिनको सबै घण्टामा पदार्थसँग व्यवहार गर्ने बानीमा छौं। एउटा कम्प्युटर, हाम्रो स्मार्टफोन, एक टेबल, आदि। तिनीहरू साधारण पदार्थ बाट बनेका छन्। यद्यपि हाम्रो ब्रह्माण्ड पूर्ण रूपले साधारण चीज बाट बनेको हुँदैन, तर अँध्यारो पदार्थ।
यो अँध्यारो पदार्थलाई ना naked्गो आँखाले हेर्न सकिदैन, तर यसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई गतिशीलता दिन्छ। गाढा पदार्थ देख्न सकिदैन किनभने यो सब भन्दा गहिरा ठाउँमा छ र यो धेरै चिसो छ। यस सानो ग्रहबाट आकाशीय पिण्डहरू अवलोकन गर्न के गरिन्छ रेडिएसन पत्ता लगाउनु हो जुन अन्तरिक्षबाट यात्रा गर्दछ। यी विकिरणले हामीलाई अँध्यारो पदार्थको उपस्थितिलाई व्याख्या गर्न अनुमति दिन्छ।
गाढा पदार्थले देख्नको लागि पर्याप्त विकिरण उत्सर्जन गर्दैन, तर यो त्यहाँ छ र उपकरणहरू र सांख्यिकीय विश्लेषणको प्रयोग गरेर विश्लेषण गरिन्छ, यसले कसरी काम गर्दछ भनेर। गाढा पदार्थ यति चिसो र कालो छ कि यसले केहि पनि उत्सर्जन गर्दैन, त्यसैले यसलाई देख्न सकिदैन।
किनभने यसको विश्लेषण गर्न सकिदैन, यो के बनेको हो थाहा छैन। यो निम्नबाट बनेको हुनसक्दछ न्यूट्रिनो, डब्ल्यूआईएमपी कणहरू, गैर-चमकदार ग्यास बादलहरू, वा बौने ताराहरू।
तपाईं कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि अन्धकार पदार्थ छ?
त्यो प्रश्न एकदम चाखलाग्दो छ, किनकि यदि त्यसलाई छोएर वा पत्ता लगाउन सकिदैन भने, यो अवलोकन गर्न असम्भव छ। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि अँध्यारो पदार्थ हाम्रो कल्पनाशक्ति र कल्पनाको अंश हो, तर विज्ञान प्रमाणमा आधारित छ।
यद्यपि यो सत्य हो कि अन्धकार पदार्थको अस्तित्व केवल एक परिकल्पना मात्र हो, यद्यपि यो एक प्रमाणित र प्रमाणित तथ्य होइन, त्यहाँ असंख्य प्रमाणहरू छन् जुन स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ कि यो त्यहाँ छ।
यो १ 1933 XNUMX मा पत्ता लागेको थियो, जब एफ। Zwicky ले यसको व्याख्या गर्न नसक्ने प्रभावको जवाफमा यसको अस्तित्व प्रस्ताव गर्‍यो: आकाशगंगाको गति कुन गतिमा। यो एक उम्मीद के गर्न सहमत गरेनन् अध्ययन र गणना पछि बाहिर। यो पहिले नै विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाइसकेका थिए।
पछि केही अवलोकन पछि, अस्तित्व एक द्रव्यमानले ठाउँ र आकाशीय पिण्डहरूको गुरुत्वाकर्षण अन्तर्क्रियामा परिवर्तन ल्यायो, तर त्यो देख्न सकिदैन। जहाँसम्म, यो त्यहाँ हुनु पर्छ। अँध्यारो पदार्थको प्रभाव अवलोकन गर्न, एक अन्य टाढा आकाशगंगा जस्तै टाढाको आकाशीय शरीरहरु मा हेर्नु पर्छ।
केको लागि अन्धकार छ?
यदि अँध्यारो पदार्थलाई कुनै पनि हिसाबले हेर्न, छोएर वा पत्ता लगाउन सकिदैन भने हामी किन गाढा पदार्थको बारेमा जान्न चाहन्छौं? साधारणतया, वैज्ञानिकहरूले ब्रह्माण्डको गतिशीलताबारे स्पष्टीकरणहरू खोज्ने प्रयास गर्छन्। आकाशीय पिण्डहरूको आन्दोलन, जडत्व, ठूलो धमाका ... यदि हामीले कालो पदार्थको उपस्थिति परिचय गरायौं भने सबै चीजको यसको स्पष्टीकरण हुन्छ।
अँध्यारो पदार्थले वास्तवमा ब्रह्माण्डलाई बढी नजिकको रूपमा जान्नका लागि काम गर्दछ। यो एक विचार हो, एक इकाई हो, जसले हामीलाई अझ राम्ररी बुझ्न हामीलाई अनुमति दिन्छ कि हामी कसरी काम गर्छौं भनेर जान्न, साथै हामीलाई थाहा छैन के प्रकट गर्दछ। कणहरूको अन्तर्क्रिया जसको अन्तर्क्रिया यति कमजोर छ यसले हामीलाई हाम्रो ब्रह्माण्डका पक्षहरू पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ जुन हामीले सोचेका पनि थिएनौं। यसले अँध्यारो पदार्थलाई परिणत गर्दछ उपकरणमा, परिकल्पना भन्दा बढी, अमूल्य। र हामी यो देख्न पनि सक्दैनौं।
जे भए पनि अँध्यारो पदार्थ हो, यो स्पष्ट छ कि यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामीलाई थाहा छ धेरै जसो ब्रह्माण्ड यसको बनेको छ। थप रूपमा, यसले हाम्रो ब्रह्माण्डको कामको बारेमा धेरै समाधानहरू दिन सक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » अँध्यारो पदार्थ के हो र यो केको लागि हो?